प्रेरणादायी जीवन बाँचिरहेका प्रबल गुरुङलाई १७ प्रश्न « Naya Page
प्रेरणादायी जीवन बाँचिरहेका प्रबल गुरुङलाई १७ प्रश्न
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्दै आएका ‘फेशन’ डिजाइनरु प्रबल गुरुङ नेपालमा हुर्किएर विश्वमै प्रसिद्धी कमाउने सीमित व्यक्तिमा पर्छन्। ३८ वर्षको उमेरमा उनले ‘फेशन डिजाइनिङ’को क्षेत्रमा पाएको सफलता लोभलाग्दो छ। उनले तयार पारेको पहरिनमा पूर्व अमेरिकी प्रथम महिलादेखि ब्रिटेनकी राजकुमारी र हलिवुड र बलिवुडका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चित कैयौँ महिलाहरु सजिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा उनका लाखौँ प्रशसंक छन्। आफ्नै नामको फेशन ब्राण्ड स्थापना गरेका उनका भारतको मुम्बईसहित अमेरिका र युरोपमा १०० वटा फेशन स्टोर छन्। फेशन दुनियाँमा आफूलाई स्थापित गराएका तिनै प्रबल गुरुङसँग बिबिसीले गरेको कुराकानीलाई अरुको लागि पनि उत्प्रेरणा बनोस् भन्ने उद्देश्यले यहाँ साभार गरिएको छ :
काठमाण्डूदेखि न्यूयोर्कसम्मको आफ्नो सफलताको यात्रा फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ?
तपाईँका संघर्षका दिनहरु कस्ता थिए ?
काठमाण्डूमा जब मैलै फेशन डिजाइनिङमा लाग्ने आफ्नो इच्छाबारे कुरा निकाल्दा मेरा बुवा, आमा, दिदी-भिनाजु, दाइसहित मेरो परिवारले पूर्णरुपमा साथ दियो। तर त्यहाँबाहेक सबैले यो त राम्रो शौख हो तर काम चाहिँ के गर्ने भनेर होच्याएर कुरा गरेको थुप्रै पटक सुन्नुपर्‍यो। के लुगा सिउने काम गर्ने भनेर उनीहरुले सोध्ने गर्थे किनभने काठमाण्डू जस्तो ठाउँमा हामीलाई डाक्टर, इञ्जिनियर सबैभन्दा ठूलो काम त्यसबाहेक कि फाइनान्समा काम गर्नुपर्‍यो भन्ने सोच राख्ने गरिन्छ।
अझ केटा मान्छे त्यो पनि लुगाको काम गर्ने भनेर ठूलै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। तर मेरी आमाले भने संसारमा आफूलाई मन लागेको चिज जुन कामले भित्रदेखि खुशी दिन्छ, त्यही नै काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुभएको थियो। पैसा कमाएर मात्रै जिन्दगीमा केही फरक पर्दैन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। खुशी लाग्ने गरी काम गर्न र त्यो कामबाट आफूलाई मात्रै नभएर अरुलाई पनि फाइदा पुग्नुपर्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। शुरु शुरुमा मैलै सहयोग पाइनँ तर मलाई अहिले त्यसलाई लिएर न कुनै रिस छ न कुनै दुःख छ। मैलै फेशन डिजाइनिङ पढ्दा कोही पनि थिएनन् तर अहिले काठमाण्डू जाँदा थुप्रै युवाहरु यो क्षेत्रमा रहेको पाउँछु त्यो देखेर मलाई एकदमै खुशी लाग्छ।
जादु त थाहा भएन। तपाईँले उहाँहरुलाई नै सोध्नुपर्ला। तर मैले जुन डिजाइन गर्छु यो चाहिँ सबै मेरो भित्रैदेखि नै सफा मनले गरेको काम भएर पनि होला। म नारी जातिलाई एकदमै श्रद्धा गर्छु किनभने मेरो आमा मेरो एकदमै ठूलो प्रेरणाको स्रोत हो। हाम्रो देशमै होस् कि अरु देशमै होस् महिलाहरुलाई होच्याउने गरिन्छ। उनीहरुलाई पुरुषभन्दा तल्लो दर्जामा राख्ने गरिन्छ। असमानताको यो रीतिरिवाज संसारभर कायम छ। त्यही भएर मैले डिजाइन गर्दा जुन महिलाहरुले मैले तयार पारेको कपडा लगाउँछन् उनीहरुको आत्मविश्वास अझै बढोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसरी नै म कपडाको डिजाइन गर्छु।
तपाईँले आफ्नो कामकै कारणले केही समय पहिले तत्कालीन प्रथम महिला मिशेल ओबामासँग भेट्नुभयो, त्यसबेला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो?
त्यसबेला म भित्रैबाट भावुक भएँ किनभने मेरी आमा मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो हौसला र प्रोत्साहन दिने मान्छे हो। मलाई संसारले विश्वास नगर्दा उहाँले विश्वास गर्नुभयो। म जे छु आज उहाँकै कारणले छु। जब मलाई ह्वाइट हाउसमा एउटा ‘गर्ल्स राइजिंङ’ अर्थात् बालिकाहरु अघि बढिरहेका छन् भन्ने विषयको कार्यक्रममा बोलाइयो, मैलै मेरो आमा र मेरो भान्जी पनि लिएर आउन मिल्छ भनेर सोधेँ। त्यसको हुन्छ भन्ने जवाफ आयो। लामबद्ध भएर मेरो आमाले मिशेल ओबामासँग भेट्नुभएको त्यो क्षण म जीवनभर बिर्सिनँ। मिशेल ओबामा मेरो यात्राका लागि प्रेरणादायी हुनुहुन्छ र उहाँका विचार र सिद्धान्त मलाई एकदमै चित्त बुझ्छ। अनि मेरा सबैथोक मेरी आमा हुन्। त्यो भेटमा मिशेल ओबामाले ‘टु से वि लभ प्रबल इज एन अण्डरस्टेटमेन्ट’ अर्थात् यदि हामीले प्रबललाई माया गर्छौँ मात्रै भन्यौ भने त्यो कम हुन्छ निक्कै धेरै माया गर्छौँ भन्नुभयो। त्यो क्षण मेरो लागि एकदमै अविस्मरणीय हो। त्यसबेला मैलै संसारलाई धन्यवाद दिए। म नेपालदेखि एउटा लुगा बनाउने डिजाइनर बन्न र आफ्नै सानो व्यवसाय गर्न न्यूयोर्क आएको थिएं तर त्यो क्षण मैले इच्छा र आशा राखेको भन्दा धेरै परको थियो।
मैलै अघि पनि भने नारी जातिप्रति मेरो एकदमै ठूलो श्रद्धा छ त्यसबाहेक मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ। सरकार र राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पदहरुमा अहिलेसम्म नेपालदेखि विश्वभर पुरुषहरुको व्यापक उपस्थिति छ। त्यही भएर संसारमा जलवायु परिवर्तनदेखि कैयौँ समस्या आएका छन्। असमानता, जातीय विभेद जस्ता विश्वव्यापी समस्या धेरैजसो पुरुषकै कारणले भइरहेका छन्। मलाई के लाग्छ छ भने यदि निर्णय गर्ने टेबलमा २० जना मान्छे छन् भने १० जना महिला हुनैपर्छ, त्यसपछि निर्णय नै फरक पर्छ। पढेलेखेका महिलाले त्यस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्छ। महिलाहरुको सोचाई अलि फरक छ। नेपालमा गाउँघरमा भन्छन् नि यदि महिलाले काम गरेर पैसा कमाएको छ भने परिवारलाई हेर्छ तर पुरुषहरुले कमाएका छन् भने रक्सी खान जान्छ। मलाई त्यो ठीक हो जस्तो लाग्छ।
महंगो नै हो किनभने गुणस्तर कायम राख्न त्यो गर्नैपर्छ। यो टीसर्ट जति सबै इटलीमा बन्छ र त्यो एकदमै उच्चगुणस्तरको हुन्छ। यसमा ‘प्रिन्ट’ गर्ने काम न्यूयोर्कमा हुन्छ। एउटा गुणस्तरको कुरा भयो र त्यो बनाउँदा नै महंगो हुने कुरा भयो। त्यसबाहेक अरु टीशर्टकै मूल्यसँग समान बनाएर त्यसको पनि दाम राखेको हो। त्यसको केही रकम हामीले मेरो फाउण्डेशन, वकिलहरुको अर्को एउटा संस्थालाई पनि परोपकारी काम गर्न उपलब्ध गराउँछौँ।
तपाईँले विगतमा आफ्नो पहिरनको डिजाइनहरुमा विशेष गरी नेवारी संस्कृतिको एकदमै प्रभाव छ भन्नुभएको थियो। कस्तो खालको प्रभाव भन्नुभएको हो?
मैले अहिलेसम्म गरेको पहिरनको डिजाइनमा कुनै सिजनमा नेपालको बारेमा ठूलो रुपमा आउँछ कुनै सिजनमा सानो रुपमा आउँछ। शुरुदेखि नै मलाई म परम्परागत किसिमको पोशाक डिजाइन गर्ने खालको डिजाइनरमा सीमित हुन मन लागेको थिएन। विश्वव्यापी रुपमा नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने डिजाइनर बन्न म चाहन्थेँ। तर अहिलेसम्म गरेको डिजाइनमा मलाई नेवारी संस्कृतिदेखि लिएर मुस्ताङको अनि काठमाण्डूको प्रभाव सबै संग्रहमा भइनैरहेको हुन्छ। देश छाडेर गएपनि मेरो उत्पत्ति, मेरो पृष्ठभूमि सबै भन्नु नै नेपालदेखि नै शुरु भएको हो। म नेपालीको छोरा,नेपालमा हुर्किएर आएकोले नेपालको प्रभाव र प्रेरणा सधैँ हुन्छ। कुनै सिजनमा धेरै हुन्छ भने कुनैमा कम हुन्छ। नेपाल इतिहास र संस्कृतिमा एकदमै धनी छ। मेरा कामका लागि प्रेरणा लिन मैले अरु ठाउँमा गएर हेर्नै पर्दैन। उदाहरण लिनका लागि मैले अरु ठाउँ गएर हेर्नै पर्दैन। मलाई नेपालबाटै अझै धेरै गर्ने इच्छा छ। नेपालको कुनाकाप्चामा गएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न मन लागेको छ। फेशन सोमा करौडौँ अर्बौँ मानिसको आँखा लागिरहेको बेला यदि नेपाल भन्ने एउटा शब्दमात्रै पनि प्रयोग गर्न पाउँदा यत्रो मानिसमध्ये एकजनाले त नेपालबारे चासो देखाउला जस्तो लाग्छ। म शुरुमा यहाँ आउँदा मैले नेपालबाट भन्दा धेरै जनालाई थाहा पनि थिएन। उनीहरु नेपाल कहाँ छ भनेर सोध्ने गर्थे। तर अहिले उनीहरुमध्ये कतिजना नेपाल पनि गइसकेका छन्।
हातले बुनेको स्वेटर जति पनि मेरो फेशन शो मा देख्नुहुन्छ त्यो सबै नेपालमै बन्छन्। थोरै मात्रामा भएपनि सबै नेपालबाट बनाउन लगाउँछु। देशमा पनि केही गरौँ भन्ने भएर नै यसो गर्न थालेको हुँ। धेरै वर्ष भइसक्यो। फ्याक्ट्रिमा काम गर्ने ५० जनाभन्दा बढी छन्। एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा काम गराउन सजिलो छैन। एक त गुणस्तरको बारेमा एकदमै सिकाउनुपर्छ। हाम्रो नेपालीपन रमाइलो छ, चलिहाल्छ नि, भइहाल्छ नि, ठिकै छ नि भन्ने जुन हाम्रो संस्कृति छ त्यो यहाँ चल्दैन। न्यूयोर्कमा त भइहाल्छ र चलिहाल्छ भनेर सामान दियो भने व्यापार छैन भनेर उनीहरु भन्छन्। हामीले त इटालियनहरुसँग, युरोपियनहरुसँग, चिनियाँ र भारतीयहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यही भएर नेपालबाट आएको पनि त्यतिकै गुणस्तरको हुनुपर्छ। त्यसबाहेक नेपाल बन्द, नेपालको राजनीतिक वातावरणले पनि व्यवसाय गर्न गाह्रो बनाएको छ। नेपाल बन्दले कारखानाका मालिक र कामदार दुवैलाई गाह्रो बनाउने गरेको छ। कामदारले हिँडेर आउनुपर्छ, गाडीमा ढुंगा हानिदिने लगायत कारणले समयमा मसिन पुर्याउन समेत समस्या हुन्छ। लोडशेडिङ्गले अर्को समस्या दिन्छ। मैले गुनासो त गर्न खोजेको होइन तर एकदमै गाह्रो छ भन्न खोजेको हुँ।
शिक्षा फाउण्डेशन नेपाल मैले पाँच वर्ष अगाडि शुरु गरेको हुँ। म, मेरा दाइ र दिदीलाई सानैदेखि फाउण्डेशन खोलेर बच्चाहरुलाई पढाउने इच्छा थियो। १२ जना बालिकाहरुबाट शुरु गरेपछि विस्तारै-विस्तारै बढाउँदा-बढाउँदा हामीले त्यो संख्या अहिले ३०० भन्दा बढी पुर्याएका छौँ। कैदीका बच्चाहरु, बाग्मतीमा सडक सफा गर्ने श्रमिकले त्यसै अलपत्र छाडिदिएका बालिका, माथिल्लो डोल्पाका बालिकाहरु पनि छन्। नेपालमा कति वटा फाउण्डेशनहरु पैसा कमाउने जुक्तिका रुपमा पनि खुलेका छन्। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो इच्छा छैन। त्यही भएर नै हामीले लाखौँलाई गर्छौँ पनि भनेका छैनौँ। विस्तारै गर्ने राम्ररी गर्ने सबैभन्दा गर्वको कुरा नै हाम्रो लागि त्यही हो। शत प्रतिशत उठाएको पैसा हाम्रो फाउण्डेशनमा नै जान्छ।
म यहाँ बसेको १७\_१८ वर्ष भयो। मेरो कामले नै भ्रमणमा जानुपर्छ। अब युरोप जानुपर्छ, चीन जानुपर्छ अनि एसियाका अरु देशमा पनि जानुपर्छ। जहाँ जाँदा पनि नेपाली राहदानीले जति दुःख पाउने कुनै राहदानी नै छैन। मलाई व्यापार गर्न पनि बाधा नै पर्‍यो अनि मैले यहाँको पनि हुने र नेपालको पनि हुने दोहोरो राहदानी लिने विचार गरेँ। तर त्यसका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको रहेनछ। मलाई के लाग्यो भने मैले काम गरेर यत्रो नेपालको नाम ल्याइरहेको छु, फाउण्डेशन खोलेर नेपालमा नै काम गरिरहेको छु, कारखाना नेपालमा नै छ, यदि एउटा राहदानीकै कारण कसैले मलाई ए यसलाई नेपालको माया छैन भनेर सोच्छ भने मलाई उहाँहरुको विचारलाई बदल्ने कुनै इच्छा पनि छैन। उहाँहरुले जे सोचे पनि हुन्छ तर विशुद्ध व्यवसायलाई ध्यान दिएर मैले अमेरिकाको राहदानी लिएको हुँ।
नेपालमा तपाईँका धेरै प्रशसंक छन्। त्यहाँका कैयौँ युवायुवतीले तपाईँलाई नेपाललाई विश्वव्यापी रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना चर्चित व्यक्तिका रुपमा लिन्छन्। उनीहरुका आशा अपेक्षा पूरा गर्न कत्तिको गाह्रो लाग्छ?
मलाई कुनै अप्ठेरो महसुस नै हुँदैन। उनीहरुले मलाई ईमेलहरु पठाइरहेका हुन्छन्, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा सन्देशरु पठाइरहका हुन्छन् मलाई एकदमै खुशी लाग्छ। उनीहरु आफ्नो सन्देशमा ‘म अर्को प्रबल गुरुङ बन्न चाहन्छु’ भन्छन् तर म के जवाफ दिन्छु भने अर्को प्रबल गरुङ होइन पहिलो जो हो उहाँ त्यो नै हुनुपर्‍यो। मेरो कर्तव्य भनेको आफ्नो काम राम्ररी गर्ने सफलताको साथ गर्ने अनि छलकपट नगरिकन एउटा एकदमै राम्रो हृदयले गर्ने हो। त्यसबाट उहाँहरुले प्रोत्साहन पाउनुभयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध भनेजस्तै हुन्छ।
तपाईँ जस्तै न्यूयोर्कसम्म आएर आफ्नो सपना पूरा गर्ने लक्ष्य लिइरहेका नेपाली युवायुवतीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
म उहाँहरुलाई सबैभन्दा शुरुमा यहाँ किन आउने भनेर सोध्न चाहन्छु। कतिजनाले मलाई म पनि फेशन डिजाइनर बन्छु भनेर भन्छन्। मैले चाहिँ किन त भनेर सोध्ने गर्छु। यदि प्रख्यात हुने मात्रै इच्छा छ भने नगर्नुस्। कुनै पनि पेशा वा कलामा लाग्दा त्यस्तो काम गर्नुपर्‍यो कि त्यो नगरेपछि आफ्नो जीवन पनि पूरा नभएको जस्तो लागोस्। त्यस्तो पो काम गर्नुपर्छ। यदि त्यो गर्नलाई न्यूयोर्क आउन चाहनुहुन्छ वा कतै पनि जान चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्। तर के पनि सोच्नुस् भने न्यूयोर्क आउँदैमा सबैजनाले सफलता पाउँछ भन्ने छैन। सफलता पाउनलाई एउटा सीप हुनुपर्यो, त्यो भन्दा पनि मेहनत हुनुपर्‍यो। र, मेहनत मात्रले पनि पुग्दैन एउटा संकल्पको साथ काम गर्न सक्नुपर्छ।
गणतन्त्र केपी ओली र विद्या भण्डारीहरुको चाहना र रोजाइ थिएन : राजेन्द्र राई
‘हामी निर्वाचनबाट डराएका होइनौ, व्यवस्था, स्वाधीनता र संबिधानको रक्षा लागि सडकमा आएका हौं’
‘यो नै ओली अपराधको सबैभन्दा ठूलो बकपत्र हो’
‘हामी इतिहासमै नआएको संकटमा छौं, म यही संकटको सारथि बन्छु’